विश्वकै २० प्रतिशत अक्सिजन दिने अमेजन वन डँढेलाेकाे चपेटामा, पृथ्वीकै संकट सुरु भएकाे चिन्ता | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार विश्वकै २० प्रतिशत अक्सिजन दिने अमेजन वन डँढेलाेकाे चपेटामा, पृथ्वीकै संकट सुरु...
विश्वकै २० प्रतिशत अक्सिजन दिने अमेजन वन डँढेलाेकाे चपेटामा, पृथ्वीकै संकट सुरु भएकाे चिन्ता
२०७६, ७ भाद्र शनिबार ०९:५६
दक्षिण अमेरिकाकाे ब्राजिलियन वर्षा वन (amazon rainforest) मा भइरहेको भीषण आगलागी र बढ्दाे विनाशका श्रृंखलाले पृथ्वीको संकटपूर्ण अवस्थालाई संकेत गरेको छ । केही समयअघिबाट सुरु भएको आगलागीले अहिले जंगलको धेरै जसो भू-भाग जलाएर नष्ट गरिसकेको छ । वातावरणीय संगठन र अन्वेषकहरूले आगलागीको कारण एवं जिम्मेवार मानिस नै रहेको आरोप लगाएका छन् । तर ब्राजिलका केही सरकारी अधिकारीलहरूले भने लाइटिनिंग अर्थात् चट्यांगका कारण अागलागी भएकाे जनाइरहेका छन् ।
ब्राजिलमा अवस्थित अमेजन सदावहार जंगल विश्वकै ठूलो जंगल हो । यसबाट विश्वमा मानवजातिलाई चाहिने कुल अक्सिजनकाे २० प्रतिशत अक्सिजन आपूर्ति हुने गर्दछ । १६ हजारभन्दा बढी प्रजातिका वनस्पति रहेको यो जंगलले पूरै विश्वको पारिस्थितिक पद्धतीमा निकै ठुलो योगदान पुर्याइरहेको अवस्था छ ।
अहिले ‘अमेजन हैन, हाम्रो घर जलिरहेको हो’ भन्दै ट्विटरमा प्रेफरअमेजन (#PrayForAmazon) ह्यासट्यागका हजारौँ, लाखौँ ट्विटहरु ट्रेन्डिंगमा छन् । यसले के देखाउँछ भने अहिले विश्वका अन्य देशका मानिसकाे समेत साझा चिन्ताकाे विषय बनेकाे छ- अमेजन वनकाे डँढेलाे । यसले गर्दा पृथ्वीमाथि नै संकट सुरु हुने एकथरी वैज्ञानिकहरुकाे विश्लेषण छ ।
यो वर्ष (सन् २०१९ को जनवरीदेखि अहिलेसम्म) अमेजनमा सेटेलाइट डाटाका अनुसार ७२ हजार आगलागी भएकाे देखिएको छ । हाल भइरहेकाे भीषण अागलागी गत वर्षकाे भन्दा ८५ प्रतिशतले बढिरहेकाे एक तथ्यांकले जनाएकाे छ ।
यही २० अगस्टअघिबाट भने अमेजनमा अहिलेसम्मकै भीषण आगलागी भइरहेको छ । यो आगलागी गत वर्षको भन्दा ८५ प्रतिशतले बढी खतरनाक भएको वातावरणीय संगठन र अन्वेषकहरूले जनाएका छन् ।
‘अमेजन वाच’ नामक गैर-नाफामुखी संगठनका निर्देशक क्रिश्चियन प्राइरोरले अमेजनमा क्यालिफोर्निया वा अष्ट्रेलियाका जंगलहरु जस्तै आगलगाी नहुने तर मानिसहरुका कारण मात्रै अमेजन वन आगोको लपेटामा परिरहेकाे भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सेटेलाइटबाट देखिएकाे अागलागी
जिम्मेवार काे ?
प्राइरोरले ब्राजिल सरकारले कृषि प्रोजेक्ट चलाएर वनफडानी गर्दै गाईपालन, कृषि फार्म लगायतका आर्थिक उन्नतिका नाममा चालिएका कदमका कारण मानिसहरुले नै अमेजनमा भीषण आगलागी गराइरहेकाे बताएका छन् । उनी लगायत अन्य कतिपय सराेकारवालाहरुले समेत आगलागीको जिम्मेवार ब्राजिलका राष्ट्रपति जैयर बोल्सनोरो रहेको आरोप लगाएका छन् ।
(Via @anttilip of @IlmaTiede)
5:01 PM – Aug 12, 2019
राष्ट्रपति जैयर बोल्सनोरोले वन क्षेत्रमा कृषि प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर आर्थिक उपलब्धि गर्ने कुरा अघि सारेका थिए । सोही कारणले राष्ट्रपतिकै उक्साहटमा मानिसहरुले वनफडानीको सजिलो तरिका आगजनी गर्दै काम अघि सारेको र आगलागी भयावह बन्दै गएको विभिन्न संगठनहरू, अभियन्ताहरु र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले जनाइरहेका छन् ।
बोल्सनोरो राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार भएका बेला उनले अमेजनको आर्थिक सम्भावनाको अन्वेषण गरेर अर्थव्यवस्था पुनर्स्थापित गर्ने बताएका थिए । कतिपया गैर-सरकारी संगठनहरूले अमेजनको संकटपुर्ण अवस्थााबारे ब्राजिलियन याे कदमप्रति निकै आपत्ति जनाएका छन् ।
तर ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सनोरोले यो सबै कुरा झुटो भएको बताएका छन् । उनले आगलागीको कुरा ९५ प्रतिशत मात्रै साँचो रहेको र बाँकी ५ प्रतिशत सामाजिक सञ्जालले उचालेको बताएका छन् । उनले लाइटिनिंग (चट्यांग)का कारण आगलागी भएको र यसमा अनावश्यक राजनीति गर्न थालिएकाे समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सन् १९८४ पछि २०१८ सम्म अमेजनमा बढेकाे फडानी
त्यहाँका मानिसहरुकाे रवैयाका कारण नै प्रत्येक वर्ष यो जंगल विनाशको क्रम जारी छ । गत जुलाई २ मा बीबीसीमा आएको एक रिपोर्टले सोताका प्रति मिनेट एक फुटबल मैदान बराबरका हिसाबले अमेजन जंगल विनाश भइरहेको जनाएको थियो । केही दशकमै याे जंगल तीव्र विनाशकाे चपेटामा परेकाे विभिन्न अध्ययनले देखाएकाे छ ।
दिउँसै शहर अँध्यारो
आगलागीका कारण अमेजन जंगल आसपासका शहरहरु धुवाँले ढाकिएर दिउँसै अँध्यारा भएका छन् । गत सोमबारका दिन ब्राजिलको अमेजनस र रोन्डोनिया राज्यहरूमा फैलिरहेको भीषण डढेलाेको धुँवा करिब २७ सय किलोमिटर टाढा रहेको शहर साओ पाउलोमा समेत पुगेपछि पुरै शहर करिब एक घण्टाजतिका लागि अँध्यारो भएकाे थियो ।
साओ पाउलोमा दिँउसै अँध्याराे
त्यहाँका एक स्थानीयले पानी परेको दिन, बादल लागेको दिनभन्दा पनि डरलाग्दो किसिमले अँध्योरो भएको बताएका थिए । ती स्थानीयले सोमबारको दिन नै रातमा परिणत भए जस्तै अवस्था सिर्जना भएको बताएका थिए ।
कतिपय मानिसहरुले ट्विटरमा ब्राजिलका राष्ट्रपतिको ट्विट रिप्लाई गर्दै उनले यसबारे कुनै वास्ता नराखेको आरोप लगाएका छन् ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपतिकाे चिन्ता
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले ट्विटरमा मार्फत ट्विट गर्दै २० प्रतिशत अक्सिजन दिने अमेजन संकमा रहेको छ प्रति चिन्ता जाहेर गरेका छन् । ‘यो विश्व संकट हो’ भन्दै उनले वेलैमा समाधान खाेज्न तुरुन्तै आपतकालीन वार्ता एवं छलफल गर्नपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
1:00 AM – Aug 23, 2019
उता युरोपेली आयोगले पनि यसबारे चासाे राखेकाे देखिन्छ । ‘अमेजन वन हाम्रो फोक्सो बराबर हाे,’ आयाेगले निकालेकाे विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, ‘अहिले हाम्रो फोक्सो जलिरहेको छ । यसको नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नु जरुरी छ ।’ उसले बिहीबार मात्रै अमेजनप्रतिकाे चिन्तासहित एक विज्ञप्ती निकालेको थियो ।
अमेजनको महत्व के/कति ?
अमेजन विश्वकै ठुलो जंगल हो । यसको पुरै खोज-अनुसन्धान अझैै हुन सकेको छैन । यो जंगलमा रहेका अर्बाैँ बनपस्पतिहरुले सयौँ, हजारौँ वर्षदेखि विशाल मात्रामा कार्बन्डाइअक्साइड सञ्चित अवथा सोसेर राखेका छन् । र, पर्यावरणमा उत्तिकै मात्रा अक्सिजन आपूर्ति गरिरहेकाे छ ।
यहाँकाे जंगलमा पाइने सदावहार प्रजातिका रुखका हरिया पातहरुले प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड सोस्ने गर्छन् । नभए उक्त कार्बनडाइअक्साइड वायुमण्डलमा मिसिएर पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
अमेजन जंगल क्षेत्र
हालैको एक अनुसन्धानले अमेजन जंगलले करिब ७ देशबाट विभिन्न किसिमका इन्धनहरुबाट निस्कने हानिकारक ग्यास कार्बनडाइअक्साइडलाई भित्र तानेको देखिएको थियो । अर्थात् सो मात्राको हानिकारक ग्याँस जंगलका बोट-बिरुवाहरुले सोसेर वायुमण्डलमा मिसिनबाट जोगाएकाे पाइन्छ ।
त्यस्तै यो जंगल पृथ्वीमा रहेका सबै जनावर र बोटविरुवामध्ये १० प्रतिशतको वासस्थान रहेकाे बताइन्छ । जैविक विविधताका कारण समेत महत्वपुर्ण रहेको यो जंगलकाे आसपासमा लाखौँ मानिहरु बस्छन् । जसकाे जीविकाेपार्जनकाे स्राेत पनि याे रहिआएकाे छ ।
(एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा) Source: News24nepal.tv
Previous articleशालिकरामले अस्मितालाई परिबन्दमा पारेको सनसनीपूर्ण खुलासा, रवि लामिछाने निर्दोष ?
Next articleनयाँ योजनाहरु ल्याउँदै महालक्ष्मी ईन्स्योरेन्स